Madal Barnaamijyada Cloud | GIGALIGHT
Modules Optical Transceiver
Fiilooyinka Fikradaha Farsameysan
Muujiyeyaasha iswada ee indhaha ee iswada
Platform Cloud Platform
Dhibcaha Muhiimka ah
Barnaamijka ugu fiican iyo Qalabka Imtixaanka
Naqshadeynta Xarunta Macluumaadka Optics
Waxaan diirada saarnaa waayo-aragnimada isticmaale ahaan adigoo ku dhexjiraya barmaamijka internetka si aad uula socdo xaalada marxaladda adeegsiga mar kasta iyo waqtiga ugu haboon ee macaamiisha iyo xalinta dhibaatooyinkooda.
Silsilad aan kala sooc lahayn
Adeegga daruuriga ah ee isku dhafan ayaa si dhib leh u xiri kara silsiladda alaabta ee alaab-qaadayaasha wax-qabadka, fiilooyinka wax-qabadka firfircoon ee firfircoon, iyo qalabyada fiilada smart Gigalightadeegga daruuriga ah ee gaarka ah.
Madal & Ecology
Waxaan dhisaynaa a Gigalight dukaanka internetka sida muraayada daruuriga ah oo awood u leh inay wax ka qabato isbeddelada suuqyada iyo mashaariicda ganacsiga. Iyagoo ku tiirsan xayawaanka daruuriga ah, waxaanu badbaadin karnaa ilaha iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Waxyaabaha daruuriga ah
400G QSFP-DD Hubiyaha
Hubinta 200G QSFP56
200G QSFP-DD Hubiyaha
25G SFP28 Hubiyaha
10G SFP + Hubiye
SANDUUQ LAGU HELI KARO
Barnaamijka "Cloud Programmer"
Gigalight Transceivers indhaha
Waxsoosaarka daruuriga ah
Iyadoo in ka badan lacagtii tiknoolajiyadeed ee 11-sano iyo kaydka, Gigalight wuxuu abuuray qaab u gaar ah wuxuuna horseeday isbeddelka suuqa ee R & D iyo soosaarida qalabka wax lagu wareejiyo, qalabka indhaha iyo meelaha kale. Waxay si tartiib tartiib ah u dhiseysay nidaam-abuuris wax-ku-ool ah oo indha-indheyn indho-indheyn ah oo hoos yimaada xilligii daruuraha, iyadoo siineysa adeegyo daruur u leh adeegsiga dariiqyo soo saareyaal badan oo caan ka ah adduunka. Waxaa ka mid ah: barnaamij madal barnaamij daruur ah oo loogu talagalay maaraynta qalabka wax lagu duubo ee macaamiisha u suurta geliya inay u habeeyaan qaabeeyeyaasha muuqaalka 'encoding', imtixaanka khadka tooska ah, baaritaanka macluumaadka qadka tooska ah & isdhexgalka ee serverka daruuriga ah, kaasoo suuqa la galiyay; nidaamka cusbooneysiinta qalabka wax lagu duubo ee fog; taxane ah SFP+/SFP28/QSFP28 hubinta optics; nidaam wax soo saar daruur ah oo horumarineed oo awood u leh inuu u furo heerka kala dambeynta, wax soo saarka & soo saarista, saadka alaabta iyo macluumaad kale macaamiisha.
Waxaan diirada saareynaa khibrada isticmaale adigoo dhiseyna madal adeeg smart online ah si loola socdo xaalada products'Isticmaalka waqti kasta iyo jawaabta waqtiga ku habboon ee macaamiisha iyo xallinta dhibaatooyinkooda. Adeegga daruuraha isku dhafan wuxuu si aan kala go 'lahayn isugu xiri karaa silsiladaha wax soo saarka ee qalabka wax lagu gudbiyo, fiilooyinka firfircoon ee firfircoon, iyo aaladaha casriga ee fibaarka Gigalight adeegga daruuriga ah ee gaarka ah. Waxaan dhisaynaa a Gigalight dukaanka internetka sida muraayada daruuriga ah oo awood u leh inay wax ka qabato isbeddelada suuqyada iyo mashaariicda ganacsiga. Iyagoo ku tiirsan xayawaanka daruuriga ah, waxaanu badbaadin karnaa ilaha iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Waxaan ku dabooli karnaa shuruudaha isticmaalka macluumaadka sheyga ee isticmaalayaasha dhamaadka gobollada kala duwan iyada oo loo marayo isku xirnaanta shabakada ilaha macluumaadka. Barxadda wax soo saarka daruurta ee khadka tooska ah, nashqad isticmaal saaxiibtinimo leh, iyo adeegga macaamiisha khadka tooska ah ee 24-saac ah. Waxaan ku siin karnaa macaamiisheenna taageerada farsamo ee ugu wanaagsan si toos ah loogu xalliyo su'aalaha aasaasiga ah ee macaamiisha. Markaan bixinno adeegyada luqadaha badan ku hadla, waxaan la macaamili karnaa caadooyinka isgaarsiinta ee dadka isticmaala gobollada kala duwan waxaanna si weyn u wanaajin karnaa waqtiyada isgaarsiinta. Horumarka degdega ah ee internetka mobilada ayaa u horseeday qaabka APP inuu noqdo mid ku adkaada dadka isticmaala. Waxay u keentaa macluumaad caqli-gal ah, ku habboon oo hufan & adeegyo wax soo saar ah dadka isticmaala wakhti kasta iyo meel kasta.
Modules Optical TransceiverFiilooyinka Fikradaha FarsameysanMuujiyeyaasha iswada ee indhaha ee iswada
Shabakad HelitaanXarunta MacluumaadkaWDM / CoherentShabakada 5GAmniga ServerFiidiyowga Fidinta
War-SaxaafadeedUpcoming EventsWarshadaha Warshadaha
Nagu saabsandhaqankaHonorsDhibcaha Muhiimka ahCareersNala soo xiriir
Helaan dalabyo gaar ah, warar, iyo in ka badan.
Email ugu dir: sales@gigalight.com
Nagu saabsan Nala soo xiriir Xarunta Download